ဘယ်အချိန်မှာ Cardano စျေး (ADA) နှင့် Ethereum (ETH) Skyrocket လိမ့်မည်ဒီမှာပါ! | BitcoinEthereumNews.com
ဘယ်အချိန်မှာ Cardano စျေး (ADA) နှင့် Ethereum (ETH) Skyrocket လိမ့်မည်ဒီမှာပါ!
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအားစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် Cardano စျေးနှုန်းမှာအများအားဖြင့်ရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ADA သည်လက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၁.၅၈၁၇ ဖြင့်ရောင်း ၀ ယ်နေပြီးလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကဲ့သို့ဈေးနှုန်းအတိုင်းသာဖြစ်သည်။
ဤသည်လက်ရှိစုစည်းပြီးတစ်ခွက်နှင့်ကိုင်တွယ်ပုံစံဖန်တီးသော ADA စျေးနှုန်းဇယားအပေါ်လက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်ဖွယ်ရှိသည်။ ဤပုံစံသည်များသောအားဖြင့်အီရန်နိုင်ငံ၏လမ်းကြောင်းသစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်ကိုညွှန်ပြသည်
ယခု Ethereum သည်လတ်တလောလများ၌ Bitcoin ၏ကျော်လွန်မှုသည် Bitcoin ထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ Bitcoin ၏အမြတ်အချိုးမှာ ၁၀% ရှိသေးသည်။ ETH ၏စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၅၆၂.၃၂ ဖြစ်ပြီးယခင် ၂၄ နာရီအတွင်း ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
BTTC နိမ့်ကျသည်နှင့် Ethereum (ETH) & Cardano (ADA) စျေးသည်ပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်
နာမည်ကြီးလေ့လာသူနှင့်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Michael Van De Poppe က Cardano နှင့် Ethereum တို့ကိုအနိုင်ယူရန်အဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ တွစ်တာပေါ်မှ Pop Pop ကပြောကြားရာတွင် crypto market ၏စံပြပုံစံမပြည့်စုံသောအသွင်အပြင်ရှိသော်လည်း altcoin များသည် Bitcoin နှင့်ပေါင်းစပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
သူ၏အဆိုအရ Bitcoin သည်အောက်ခြေသို့ရောက်သောအခါ Ethereum (ETH) နှင့် Cardano (ADA) တို့သည် ၂၀၂၁ အမြင့်ဆုံးသို့တက်မည်
သို့တိုင်, #altcoins ဆန့်ကျင် $ BTC ကောင်းပါတယ်။ ရုံခိုင်မာအောင်။$ ETH နှင့် $ ADA နှစ်ပတ်လည်စံချိန်တင်မြင့်တံခါးများ၏ခေါက်နေကြသည်နှင့်ဖြတ်သန်းရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ငါသူတို့တစ်ချိန်ကလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် # Bitcoin အောက်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
- Michael van Pop Poppe (@CryptoMichNL) ဇြန္လ 8, 2021
သူကပြောကြားသည်မှာ ADA / BTC သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 0.000062 အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လက်ရှိစျေးနှုန်း 34.7 မှ ၃၄.၇% တိုးလာလိမ့်မည်။
Cardano ကဂရုမစိုက်ပါဘူး။ Bitcoin စုံတွဲအတွက်နှစ်စဉ်အမြင့်ဆုံးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
ကုန်သည်သည် crypto market ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ဆင့် (၂) ဆင့်ကိုလည်းထုတ်ပြောခဲ့သည်။ သူကပိုမိုကြီးမားသော crypto စျေးကွက်များ၌စိတ်ဓာတ်အလွန်ဆိုးရွားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သူကဤသည်အီလက်ထရောနစ်အရိပ်အယောင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
- Michael van Pop Poppe (@CryptoMichNL) ဇြန္လ 7, 2021
Tags: ADA, Cardano, ETH, Ethereum, ဟေ့, စျေးနှုန်း, နေပြည်တော်
နွေရာသီအကုန်တွင် Crypto Trading အခွင့်အလမ်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပွဲစားများ
Cramer's Mad Money Recap: GameStop၊ CrowdStrike, Wendy's